အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက စာလေးတစ်စောင်..
အဲဒီအထပ်မှာ တာဝန်ကျတဲ့ သူနာပြုကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြပါတယ်။ သူမက အဖိုးအိုဂိုလ်းစတိုင်းဟာ အိပ်မယ်မထင်သေးကြောင်း၊ စာကြည့်ခန်းမှာ စာအုပ်ဖတ်နေဦးမယ် ထင်ကြောင်း၊ သူက စာဖတ်ရတာကို အင်မတန် နှစ်သက်သူဖြစ်ကြောင်း၊ ညစဉ်ညတိုင်း စာကြည့်တတ်သည့်သူ ဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် အဖိုးအကြောင်းပြောကာ စာကြည့်ခန်းဆီ ကျွန်တော်တို့ကို ခေါ်သွားပါတယ်။
မီးလင်းနေတဲ့ စာကြည့်ခန်းမှာထဲမှာတော့ စာဖတ်နေတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော အဖိုးအိုကို တွေ့ရပါတယ်။ သူနာပြုက အဖိုးအိုထံ လျှောက်သွားပြီး ပိုက်ဆံအိတ် ပျောက်မပျောက် မေးလိုက်ပါတယ်။ အဖိုးအိုက ကျွန်တော်တို့ လူစုကို အံ့သြစွာ လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး “ဟုတ်ပါတယ် ဒီမနက် ပိုက်ဆံအိတ်ကျပျောက်ခဲ့တယ်” လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က အရှေ့ကိုလျှောက်လိုက်ပြီး အဖိုးအိုအနီး ရပ်လိုက်ကာ “ဒီဟာက အဖိုးရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်မဟုတ်လား ” လို့ပြောပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ကို ပေးလိုက်တော့ အဖိုးအိုရဲ့ မျက်နှာဟာ ရွှင်ပျသွားခဲ့ပြီး စိတ်သက်သာရာရသွားဟန် အထင်းသား ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ “ဟုတ်ပါတယ် ဒီအိတ်ဟာ အဖိုးရဲ့အိတ်ပါ။ ဒီမနက် လမ်းလျှောက်ထွက်တုန်း ကျကျန်ရစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီထိအောင် ပြန်လာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူလေးကို အဖိုး မုန့်ဖိုးပေးပါမယ်ကွယ်” လို့ ပြုံးရွှင်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ ပြောကာ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖိုး.. ကျွန်တော့်အတွက် မုန့်ဖိုး မလိုပါဘူး .. ဒါပေမဲ့ အဖိုးကို ကျွန်တော် ပြောစရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီပိုက်ဆံအိတ်ကို ကောက်ရတော့ ပိုင်ရှင်ကို ပြန်ပေးချင်တဲ့အတွက် ပိုင်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လိပ်စာ တွေ့လိုတွေငြားနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက စာကို ဖတ်လိုက်မိပါတယ် ” ကျွန်တော့စကားကို ကြားတာနဲ့ အဖိုးရဲ့ မျက်နှာပေါ်က အပြုံးဟာ ချက်ခြင်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး ဒေါသသံနဲ့ ကျွန်တော့ကို ပြောပါတော့တယ်။
“မင်း.. ဒီအိတ်ထဲက စာကိုဖတ်ခဲ့တယ် ဟုတ်လား”
“ကျွန်တော် စာကို ဖတ်ခဲ့ရုံတင်မက ဒီစာကို ရေးခဲ့တဲ့ ဟန်နာဆိုတဲ့အမျိုးသမီး ဘယ်သူဆိုတာရယ် အခု ဘယ်မှာရှိနေတယ် ဆိုတာရယ်ကိုပါ စုံစမ်းသိရှိခဲ့ပါပြီ”
ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက ထွက်သွားတဲ့ နာမည်ကို ကြားလိုက်တာနဲ့ အဖိုးအိုရဲ့ မျက်နှာဟာ ဖြူဖျော့သွားခဲ့ပါတယ်။ “ ဟန်နာ?? ဟန်နာ အခုဘယ်မှာဘဲ .. မင်း သူ့ကို ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့တာလဲ.. သူနေမှကောင်းရဲ့လား.. သူ. သူ အရင်ကလိုဘဲလား. ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပါဦး။ အဖိုးကို အမြန်ပြောပြပါဦး” အဖိုးအိုဟာ ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ပါးစပ်က တတွတ်တွတ် တောင်းပန်ရင်း မေးပါတော့တယ်။
“သူ နေကောင်းပါတယ် အဖိုး.. အရင်ကလိုပါဘဲ.” ကျွန်တော်က အဖိုးရဲ့ လက်မောင်းကို ပြန်လည် ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး နူးညံ့ညင်သာစွာ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဖိုးအိုက ပြုံးလိုက်ပြန်ရင်း စိတ်အား ထက်သန်စွာနဲ့ “ သူဘယ်မှာလဲဆိုတာ အဖိုးကို ပြောပြနိုင်မလား လူကလေး” ကျွန်တော့်လက်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဆုပ်ကိုင်ပြီး ထပ်ပြောပါတယ်။ “ အဖိုး မနက်ဖန်ကျရင် သူ့ဆီဖုန်းခေါ်ချင်လို့ပါ။ လူလေးတစ်ခုခု သိထားတယ် မဟုတ်လားဟင်.. ဟန်နာဆိုတာ ဒီစာကိုရေးတဲ့ အဖိုးသိပ်ချစ်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးပါ။ သူ အဖိုးကို လမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်း အဖိုးတစ်ယောက်တည်း ဘဝမှာ အထီးကျန်နေခဲ့ရတယ်။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သူ့ကိုဘဲ ချစ်နေခဲ့တယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အဖိုးလက်မထပ်ခဲ့ဘူး”
“အဖိုး.. အဖိုး ကျွန်တော်နဲ့ ခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပါ။ ” ကျွန်တော် အဖိုးအိုကို ဆွဲခေါ်လာပြီး ဓာတ်လှေကားနဲ့ တတိယထပ်ကို ဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ သူနာပြုတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့နောက်ကို လိုက်လာကြပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားကနေဆင်းကာ ဟောလ်ခန်းမကြီးကို ဖြတ်သန်းလာတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ မီးရောင် ခပ်မှိန်မှိန်ကိုသာ တွေ့ရပြီး တတိယထပ်ရဲ့ တီဗီခန်းမှာတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အဖွားဟန်နာကို တီဗီကြည့်နေသေးတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူနာပြုတစ်ယောက်က အဖွားဆီ လျှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။
“ အဖွား ဟန်နာ.. ” သူမက အဖိုး မိုက်ကယ်ထံ လက်ညိုးညွှန်လိုက်ပြီး “ သူ့ကို အဖွား သိပါသလား” လို့ မေးလိုက်တော့ အဖွားက မျက်မှန်လေးကို ပြုပြင်လိုက်ပြီး အဖိုးကို သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ်။ သို့သော် အဖွားထံမှ ဘာစကားသံမှ ထွက်မလာခဲ့ပါ။
အဖိုးအိုက အနားသို့တိုးကပ်သွားခဲ့ပြီး “ ဟန်နာ.. ကိုယ်.. မိုက်ကယ်လေ.. မှတ်မိသေးရဲ့လား ” အလွန်တိုးဖျော့တဲ့ အသံလေးနဲ့ မေးလိုက်တော့ အဖွားကြည့်ရတာ အလွန်အံ့သြတုန်လှုပ်သွားပုံ ရပါတယ်။
“ဘုရားရေ.. မိုက်ကယ်.. ရှင်က မိုက်ကယ်လား.. အိုး ကျွန်မဖြင့် မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါဘဲ ”
အဖိုးအိုက အဖွားအိုထံ ဖြေးညင်းစွာ လျှောက်လှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆုံတွေ့ချိန်မှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်လက်ကို တစ်ယောက်က တင်းကြပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ မျက်ဝန်းမှာတော့ မျက်ရည်တွေ ရစ်ဝဲလို့နေခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ကြာအောင် ဝေးကွာခဲ့တဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြပါပြီ။ စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာတစ်ခုတည်းမှာ ရှိနေရက်နဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မတွေ့ဖြစ်၊ မဆုံဖြစ်ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကျွန်တော် ကောက်ရလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက စာလေးတစ်စောင်ကြောင့် နှစ်များစွာ ဝေးကွာနေရာကနေ ပြန်ဆုံခွင့်ရလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ သူနာပြုတို့ဟာ သူတို့နှစ်ဦးကိုထားခဲ့ပြီး တိတ်ဆိတ်စွာ လှည့်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ချစ်သူနှစ်ဦး ပြန်လည်ဆုံဆည်းတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားကို လှိုက်လှဲစွာ ခံစားစေခဲ့ပြီး အဖိုး အဖွားတို့နည်းတူ အားလုံးရဲ့ မျက်ဝန်းမှာတော့ မျက်ရည်တွေ ရစ်ဝဲနေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မျက်ဝန်းက မျက်ရည်တွေဟာ အသက် ၇၆နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဖွား ဟန်နာနဲ့ အသက် ၇၉နှစ်အရွယ် အဖိုး မိုက်ကယ်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ဆုံဆည်းမှုကို ကြည်နူးပီတိဖြစ်မိတဲ့ မျက်ရည်တွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
A letter in the wallet (Author Unknown) ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။
33 Responses to “ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက စာလေးတစ်စောင်..”
လွမ်းမောဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါလား ဒေါ်ချောရေ...ဇာတ်လမ်းတ၀က်လောက်မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ မှန်းလို့ရသွားပေမယ့် အရေးအသား ပြေပြစ်တာကြောင့် အဆုံးထိဆက်ဖတ်ဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ပို့စ်ပါ...ဘာသာပြန်လို့မပြောဘဲ မှီးပြီးရေးလိုက်ရင် သိမှာတောင်မဟုတ်ဘူး...နှစ်ပေါင်း များစွာကြာမှ ပြန်တွေ့ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် ဘယ်လောက်များပျော်လိုက်ကြရှာမလဲဆိုတာ တွေးရင်းနဲ့တောင် ပီတိဖြစ်လာတယ်...အင်း တတိယအရွယ်ရဲ့ ပထမဝေဒနာတွေပါလားလေ . . .
မျက်ရည် ဝဲရပါတယ် ချော ရယ် ..... တို့လဲ လူတယောက်ကို အဲလိုမျိုး ချစ်ချင်တယ် ... ပြီးတော့ အဲဒီ လူကပဲ တို့ကို တူညီတဲ့ချစ်ခြင်း တခု ပြန်ပေးစေချင်တယ် ....
တကယ့်ကို မျက်ရည်ကျရပါတယ် ချော အရေးအသား ကောင်းပါပေတယ် ....
ချောဆီ မရောက်ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်ပါ ....
Read the novel, sis. They stayed together in the same building and don't see each other. Thank you for sharing. (here in this phone cannot type Myanmar font :)
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရယ်.. တယ်လဲ ဆန်းကြယ်လှပါလား။ ဘိုးအို ဘွားအိုတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းက ကြည်နူးမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကထဲက သူတို့ ပေါင်းဖော်ခဲ့ရရင်လဲ ကြည်နူးစရာ စံပြ စုံတွဲလေးဘဲ ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
မချောရေးတဲ့စာတွေကိုဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်း အေးချမ်းနွေးထွေးမှုတွေကိုခံစားရတယ်၊ဘလော့ဂါတွေထဲမှာ ကျနော်သဘောအကျဆုံးပါ၊
ကိုယ်တိုင်ရေးတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာပြန်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ပြီးတိုင်း ဖတ်ပြီးတိုင်း ရင်ထဲမှာနွေးကနဲ ဖြစ်စေတယ်။
Anonymous တစ်ယောက်အနေနဲ့ အမြဲအားပေးနေပါတယ်။
တကယ်ရှိတာလား ဒီလိုမေတ္တာမျိုးပြောပါတယ် :P
တအားကောင်းတယ်နော်၊ ဒါမျိုးလေးတွေ ဘာသာပြန်တဲ့ ဘလော့ဂါချောတစ်ယောက် မေတ္တာစစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်။
btw အိမ်ရှင်က ဒကာခံမယ်နော်၊ နှစ်ယောက်တော့ဖြစ်ပါစေ ဟဲဟဲ :)
အဲဒီဘာသာပြန်စာအုပ်လေးအိမ်မှာရှိတယ် အရမ်းကြိုက်လို့ ခဏခဏဖတ်ဖြစ်တယ်....။ ဟိုးး ငယ်ငယ်တုန်းက အင်္ဂစာကျောင်းတက်ကတည်းက ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာလေးပေါ့...။ အဖိုးနဲ့အဖွားတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အားကျရင်းနဲ့ပေါ့....။
လွမ်းမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး..း))
လွမ်းမောဖွယ် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ တကယ်ကို ခိုင်မြဲတဲ့ ချစ်ခြင်းပါပဲ ။
This is so lovely Chaw, thank you for sharing!
အဲလို အချစ်မျိုးလည်း ရှိသေးတာပဲနော်..
မယုံရင် ပုံပြင်လို့မှတ် လို့ ပြောရမှာပဲ..
မသေခင် ဆုံတွေ့ခွင့် ရကြတာ ကြည်နူးစရာပါ..
ချောရေ စိတ်ကြည်နူးမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်းမျိုးပဲ နှစ်သက်တယ်။
ချောရဲ့ ပို့စ်တိုင်းမှာ ဓာတ်ပုံတွေ အများကြီးကြည့်ရတာကြောင့် ဒီတစ်ခါ ဟာတာတာနဲ့ တစ်ခုခု လိုနေသလိုပဲး))
ခိုင်မြဲတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေါ့ ..
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ ..
တကယ်အချစ်စစ်၊ အချစ်မှန်တွေပါလား ချောရယ်။ တကယ်လွမ်းမောဖွယ် ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲ။ ချောလည်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ...
ပြန်ဆုံတွေတဲ့အချန်မှာတော့ ပြောဖွယ်ရာမရှိလောင်အောင်ကို ကြည်နူးနေကြမှာပါ... ဒါပေမယ့်. မျော်လင့်နေခဲ့ရတဲ့အချိန်က နှစ်ပေါင်းက ၆၀ ဆိုတော့ မများလွန်းဘူးလားချောရယ်....
မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန် နဲ့ချစ်ခဲ့ကြတဲ့
စံပြ ဘိုးဘိုးဘွားဘွား ၂ယောက်ပြန်တွေ့ ကြတဲ့ပုံကို စိတ်ကူးထဲမှာ ပုံဖေါ်ကြည့်မိလိုက်တယ် မချော ရေ...
မချော ရော... ပိုက်ဆံအိတ် ကျပျောက်ဖူးသေးလား .. .း))
ပိတိ ဖြစ်ရပါတယ်.. အပေါ်က မကိ လည်း ပိုက်ဆံအိပ်ပျောက် လို့တဲ့.... ဒါပေမဲ့ ငယ်တုံး အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြ ဘိုးဘွားရိပ်သာ က မင်္ဂလာ ဆောင်တော့ လာနိုင်တော့ မှာ မဟုတ်ဘူး
ဖတ်ရတာ ကြက်သီးထသွားတယ်..... ဟိုတစ်ယောက် အတော်လေး ကူညီတတ်တာပဲ... ကျနော်ဆိုလည်း အဲ့လို လုပ်မိမှာ အသေအချာပါပဲ။ စတော်ဘယ်ရီပင်အောက်က မချောတို့စုံတွဲ အကြောင်းလည်း (ဟီးဟီး) ဖတ်သွားပါတယ် ဗျား... :))))))
ထူးခြားတဲ့ခံစားမှုလေးတစ်ခုပဲဗျ ။
အဲ..ပြောရရင်၊ကျန်ခဲ့ သလိုပဲပေါ့ နော်။
ဇတ်လမ်းလေးက လွမ်းစရာလေး နဲ့ အရမ်းလှတယ်
read more ကို နှိပ်တာပေါ့ မချောရာ
ထပ်ပြီး သိချင်သေးတာကိုး - စာရေးသိပ်ကောင်း
ဖတ်လို့မပြီးခင် comment ရေးလိုက်တာ။
စာအရေးအသားကောင်းလွန်းလို့ ကျွန်တော့်နောက်ကိုလိုက်တာ နောက်တော့ အဖိုးဂိုင်းစတိုင်းနဲ့ အဖွားဟန်နာနဲ့ပါတွေ့လိုက်ပါရောလား။
ဘာသာပြန်တဲ့သူကလည်း တော်လွန်းလို့ ဘာသာပြန်ထားမှန်းတောင် မေ့မေ့သွားတယ်.း)
ဇာတ်လမ်းလေးဆုံးတဲ့အထိ ဖတ်ချင်အောင် ဆွဲခေါ်သွားတယ်...စာအရေးအသား အရမ်းကောင်းတာပဲ ချောရေ... facebook မှာတွေ့လို့ ၀င်ဖတ်ဖြစ်သွားတာလေ...ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းလို့ ဆက်တောင်ဖတ်ချင်မိနေသေးတယ်.. :)
ဒီစာပြီးချိန်မှာ စိတ်ထဲဖြစ်တဲ့ အရသာက နှမျော မှုပဲ။
ချစ်လျက်နဲ့ မဆုံနိင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ ကုန်လွန်သွားတဲ့ နှစ်တွေအတွက် နှမျောနေမိတယ်။
မလာဖြစ်တာ ကြာတဲ့ အတွက် ဆောရီး မချောရေ...အလုပ်တွေနဲ့ နပန်းလုံးနေရလို့....အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ စာတစ်ပုဒ် ဖတ်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ...မချော ဒီထက် အောင်မြင်ပါစေ....